Inona no atao hoe Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Red Hat Certification - ITS
Inona no atao hoe Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Red Hat Certification
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dia lozisialy Linux (fizarana mivelatra) izay novolavolan'i Red Hat ary mifantoka amin'ny raharaham-barotra. Red Hat Enterprise Linux dia entina amin'ny serivera server ho an'ny x86, x86-64, Itanium, PowerPC ary IBM System z, ary ny birao version ho an'ny x86 sy x86-64. Ny ankamaroan'ny fanohanana sy ny fiofanana ao Red Hat, miaraka amin'ny Programan'ny Red Hat Certification dia mifantoka amin'ny sehatry ny Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux dia matetika nohafohezina amin'ny RHEL, na dia tsy fanendrena ofisialy aza izany.
Ny famerenana voalohany ny Red Hat Enterprise Linux Ny fanajana ny anarana amin'ny voalohany dia niditra tao amin'ny tsena ho "Serveur Red Hat Linux Advanced". Tao amin'ny 2003 Red Hat no nanavao ny Red Hat Linux Advanced Server ho an'ny "Red Hat Enterprise Linux AS", ary misy fiovana roa hafa, Red Hat Enterprise Linux ES sy Red Hat Enterprise Linux WS.
Ny Red Hat dia mampiasa fepetra marika hentitra mba hametrahana ny famerenana indray ny fandefasana ny dikan-teny natolotry ny Red Hat Enterprise Linux azy ireo, kanefa amin'ny fotoana iray dia manome ny fehezan-keviny tsy an-kiato. Ny mpiandraikitra mpanampy dia afaka mivondrona sy manitsy amin'ny alàlan'ny fanalàna ny endriny tsy misy endriny sans ny marika toy ny Red Hat. Ny endriny dia mampiditra ny vondrona manohintohina ny fanaparitahana toy ny CentOS sy Scientific Linux, ary ny fiasan'ny orinasa tahaka ny Oracle Linux, izay tsy manolotra ny 100% mitovy amin'ny Red Hat Enterprise Linux, satria mampiasa Oracle tsy fandaharam-potoana (fametrahana ilaina) mba hanesorana ny marika Red Hat .
Tamin'ny voalohany, ny tetikasa Red Hat, fantatra amin'ny anarana hoe Red Hat Linux, dia natao malalaka ho an'ireo izay naniry ny haka izany, raha ny Red Hat kosa dia nahazo fanohanana. Red Hat avy eo dia nifindra ho an'ny ampahany ny fanolotra azy ho an'ny Red Hat Enterprise Linux izay natao hikolokolo sy hanohana ny mpanjifa lehibe sy Fedora toy ny fampielezana ny vondrona ary ny fanohanan'ny Red Hat. Ny fampiasana mari-pamantarana maromaro dia manohintohina ny fanavaozana ny Red Hat Enterprise Linux.
Hatramin'ny nananganana Red Hat Enterprise Linux manontolo amin'ny fametrahana fandaharana maimaim-poana sy malalaka, ny Red Hat dia ahafahana miditra ao amin'ny tranonkalan'ny FTP ho an'ny rehetra izay mila azy. Araka ny tokony ho izy, fivoriana vitsivitsy no nalain'ity loharanom-baova ity ary nametraka ny dikan-teny niaviany manokana avy amin'ny Red Hat Enterprise Linux, matetika miaraka amin'ny fanovana lehibe indrindra ny famoahana ireo references amin'ny marika mena rehetra ao amin'ny Red Hat ary manondro ny rafitra fanavaozana ny Red Hat Servers. Ny bunches izay nanaovana ity CentOS ity (ny laharana faha-XVII malaza indrindra amin'ny Linux), Oracle Linux, Scientific Linux, White Box Enterprise Linux, StartCom Enterprise Linux, Pie Box Enterprise Linux, X / OS, Lineox ary Bull's XBAS superior computing. Ny rehetra dia manome vahaolana maimaim-poana amin'ny fampiharana ireo fanavaozana tsy misy vola amin'ny mpandranto.
Manova ny Red Hat Enterprise Linux dia mbola tsy mahazo orinasa orinasa na toro-hevitra avy amin'ny Red Hat ary tsy manana vokatra, fitaovana na certificat de sécurité. Toy izany koa, ny fanitsiana dia tsy miditra amin'ny fitantanana ny Red Hat toy ny Red Hat Network.
Raha ny mahazatra dia nahita fomba hanakanana ny fivoarany ho an'ny Linux amin'ny 6.0 ny Red Hat raha tsy manome malalaka ny antontan-taratasim-pamokarana amin'ny fanovana azy ireo ao amin'ny loharano, ary mamoaka fotsiny ny singa vita vita. Ny tetik'asa dia nanoro hevitra fa ny hetsika dia natao hamelezana ny fikomiana Oracle sy ny fanamafisana ny fitantanana, izay manitatra ny fampielezana. Ity fanao ity, na izany aza, mbola manaraka ny GNU GPL satria ny karazana loharano dia manavaka ho "karazan'asa azo ampiasaina amin'ny fanitsiana azy io", ary ny fandefasana dia mbola manaiky an'io famaritana io. Nanambara ny CTO Brian Stevens, tatỳ aoriana, ny fanovana, Ny tahirin-kevitra manokana, (ohatra, mamaritra ny angon-drakitra) dia omena fotsiny ankehitriny handoavana ny mpanjifa mba hahatonga ny mombamomba ny Red Hat bebe kokoa hifanaraka amin'ny orinasa mandroso maromaro izay manohana ny zava-bita RHEL. Ireo mpanakanto CentOS dia tsy nanana fihetsiketsehana ho an'ny fanovàna satria tsy nanodina ny fanatsarana ny ampahany amin'ny lahatsoratra izay nomen'ny Red Hat. Ny Oracle mpifaninana aminy no nanambara tamin'ny Novambra 2012 fa nandany ny tombontsoa RedPatch izy ireo, izay ahafahana maneho ny fahitana ankapobeny ny ampahany RHEL, misaraka amin'ny famahana azy.
Ahoana ny fametrahana Labour ho an'ny RHCSA? | RHCSA Lab